Muuri News Network » Sargaal katirsan Al-Shabaab oo Madaxiisa lacag la dul dhigay (Sawir)
Sargaal katirsan Al-Shabaab oo Madaxiisa lacag la dul dhigay (Sawir)
Laamaha amaanka Dalka Kenya ayaa lacag waxa ay madaxiisa dul dhigeen Sargaal katirsan Xarakada Al-Shabaab oo la rumeesan yahay in uu ku sugan yahay gudaha Dalka Kenya uuna abaabulayo weeraro gudaha dalkaasi ka dhaca.
Dowlada Kenya ayaa shaacisay Sawirka iyo magaca Sargaalkan katirsan Xarakada Al-Shabaab , waxa ayna Dowlada Kenya ninkan ku tilmaameen in uu yahay nin hubeesanoo qatar ah dhibaatana ka geesan kara Gudaha Dalka Kenya.
Waxaa loo balan qaaday qofkii keena xog horseedi karta in ciidamada amaanka qabtaan Sargaalkan lagu magacaabo Mohamed Kunow Yusuf (Abuu Ali), la siin doono lacag dhan 2 million oo Kenya Shillings ah.
Laamaha amaanka Dalka Kenya ayaa sheegay in Saraakiil katirsan Al-Shabaab oo kusugan gudaha Soomaaliya ay Mohamed Kunow Yusuf, usoo direen in uu xoojiyo dagaalyahano katirsan Al-Shabaab oo ku sugan Gobolka Waqooyi bari Dalka Kenya.
Kenya ayaa ka walacasan Shabakada lagu magacaabo Mustafa Ato oo ka howlgasha Deegaano katirsan Waqooyi Bari Dalka Kenya, waxa ayna Kenya aaminsan tahay in ninkan madaxiisa lacagta ay dul dhigtay uu kamid yahay saraakiisha hogaamiya Shabakadaasi.